Iindaba - 6-17 Ukutshintsha inyikima yoHlangulo oluNgxamisekileyo
Ngokuka China Earthquake Network, inyikima enobukhulu obuyi-6.0 yenzeke nge-22:55 ixesha laseBeijing nge-17 kaJuni ngo-2019 eChangning County, kwiSixeko saseYibin, kwiPhondo laseSichuan (28.34 degrees north latitude, 104.9 degrees longitude empuma), ngobunzulu beekhilomitha ezili-16. .
Inyikima ye-6.0 yenzeke ngo-22:55 ngoJuni 17, 2019 e-Changning County, eYibin City, eSichuan, enobunzulu be-16 km.Inyikima yavakala kwiindawo ezininzi eSichuan, eChongqing, eYunnan naseGuizhou.Kuyaqondwa ukuba inyikima ye-6 ifumene izilumkiso eziyimpumelelo eChengdu, eDeyang naseZiyang eSichuan.Ukusukela ngentsimbi yesi-8:00 ngokuhlwa nge-26 kaJuni ngo-2019, kwarekhodwa iinyikima eziyi-182 zobukhulu be-M2.0 nangaphezulu.
Ukusukela ngo-06:00 ngoJuni 19, 2019, inyikima ye-6.0 e-Changning, eSichuan, ibangele abantu abayi-168,000 ukuba bachaphazeleke, kunye nokufa kwe-13, ukwenzakala kwe-199, kunye ne-15,897 yokufuduka ngokukhawuleza ngenxa yentlekele .Ukusukela ngo-16:00 ngoJuni 21, inyikima yabangela ukufa kwe-13 kunye nokulimala kwe-226, kunye nenani labantu abali-177 ababulawayo.
Inyikima ye-5.4 ye-magnitude kwi-Gongxian County eyenzeka ngo-22: 29 ngoJuni 22, i-2019 yayiyinyikima ye-6.0 ye-magnitude ye-Changning ngoJuni 17. Ukusukela ngo-5: 30 ntambama ngoJuni 23, inyikima ye-5.4 ye-Gongxian County yabangela inyikima ye-Gongxian County abantu be-31 bebonke kwi-Gongxian County kunye ne-Changning County ukuba bafumane ukulimala okuncinci kunye nokulimala okuncinci, kubandakanywa nabantu be-21 ababelaliswe esibhedlele ukuze baqwalaselwe kunye nonyango.
Ekuqaleni kwentlekele, ikomkhulu lenkampani yaseShenzhen lifumene ingxelo engxamisekileyo evela kwiziko leprojekthi kwiphondo laseSichuan, kwaye ekuphenduleni isenzo sokuhlangula sikarhulumente wasekhaya eChangning County, inkampani yathumela ngokukhawuleza iiseti ze-15 ze-KLT-6180E kwi-epicenter. ukuthatha inxaxheba kuhlangulo.